Ihovini yegesi yendawo ene-can ingenye indlela enhle kakhulu esitokisini esivuthayo sokhuni, kanye nesithando somlilo, okubiza kakhulu ukusebenza.
Ukubuyekeza mayelana nezici zobuchwepheshe
Namuhla, izitsha zegesi ziye zalinganisa izinga lezici namanye amadivaysi, futhi ngezindlela eziningi zingaphezu kwazo. Izinyunithi ezinjalo ezisebenza zibhekene nokugcinwa okulula, umsebenzi ohlanzekile, nokushisa okuncishisayo kunokuba kusetshenziswe izinkuni. I-air ekamelweni le-steam isitini esinjalo siyakwazi ukufudumala esibusweni sezulu esifudumele samahora angu-4, ngesikhathi sokubusika, imishini izodinga isikhathi esincane. Ukuze uvuselele igumbi kahle, kuthatha amahora angaba ngu-8, kuningi kakhulu, kodwa umphumela ngeke uthathe isikhathi eside, ngoba i-sauna enomlilo ozophefumula izonikeza induduzo enkulu, induduzo nokufudumala kwezivakashi.
Ihhavini legesi le-cottage elinamandla lingakhethwa ngabathengi ngokuvamile ngenxa yokuthi uphethiloli weso sixhobo lunomnotho futhi lushibhile, akudingeki ukhokhe imali eningi ngokusetshenziswa kwayo, okuhlukanisa i-unit efanayo kusuka ezinkuni nasezifanekisweni zikagesi, ukusetshenziswa kwalokhu okuvela kumthengi kuchitha isikhathi Izikhathi eziningana ngemali. Abathengi bagcizelela ukuthi asikho isidingo sokunakekelwa nokunakekelwa okuqhubekayo ekusebenzeni kwesithando esinjalo, umlotha ovuthayo ohlobo lomlotha ovela gesi cishe awubonakali, lokhu kubonisa ukuthi iziteshi zendwangu yokuhlanza akudingeki ukuba njalo, le nqubo kufanele yenziwe njalo eminyakeni embalwa .
Uma unesithakazelo kuhhavini yegesi ye-villa ene-cylinder, ke, ngokusho kwabasebenzisi, kumele usebenzise futhi ufake imishini, ucabangele imithetho, ukwephulwa kwalo okufaka ingozi yokuqhuma, kanye nokuvuza kwegesi. Lokhu kungaholela ekulimazeni impahla nokulimala empilweni yabantu. Uma usebenzisa i-ovini ngokufanele, ngokulandela izincomo, ingahlala isikhathi eside. Abathengi bakhombisa isikhathi sokuxhashazwa, okulingana nengxenye yekhulu leminyaka. Ama-stovepots okuhlangenwe nakho abonisa ukuthi kufanele wenze ukulungiswa okufika ngesikhathi nokuhlolwa okuvimbela, okuzoqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokufanele komthombo wokushisa, okuqinisekisa ukuzwakalisa emzini wezwe kanye nesithando somlilo sekhwalithi.
Umbiko wekhasimende kumandla
Amandla esithando somlilo yilona uphawu olubaluleke kakhulu lwedivayisi. Kubalulekile ukukhetha izinkomba ezifanele zaleli pharamitha. Ochwepheshe abasincoma ukuthi bakhethe amamodeli anesisindo esikhulu samandla, ngoba i-ovini ayishintshi igumbi ngokushesha, bese ushintshela kwimodi encane noma ukuxhuma ngokuphelele. Uma sikhuluma ngokugeza emkhakheni wendlu yezwe, umoya uzoshisa ngokushesha, futhi amatshe ngeke abe nesikhathi sokushisa, amanzi kuwo angeke anike umusi. Uma uthenga ihhavini yegesi yendlu encane ene-cylinder, kufanele uqaphele ukuthi abanikazi abaningi benza iphutha lokuthenga amakholomu abuthakathaka abanobukhulu obuncane ngaphezu kwemingcele edingekayo. Lokhu, ngokombono wabo, kunganciphisa kakhulu izindleko. Ngalo mishini kungenzeka ukushisa igumbi lomusi, kanti isithando somlilo sizosebenza ngamandla amakhulu. Kulesi simo, imishini izohluleka ngokushesha. Ochwepheshe bacebisa ukukhetha amandla weyunithi ebangeni eliphakathi.
Ukubuyekezwa kwezakhamuzi zasehlobo mayelana nokubala kwamandla
Uma ekuthengisweni ucubungula izitofu zikagesi ze-dacha, khona-ke kuzomele uzijwayeze ngemilayezo ehlanganisiwe kuleyunithi. Abakhiqizi abaningi babonisa ivolumu ekamelweni eliphakanyisiwe, kanye nomthamo. I-Dacha incoma ukuthi ukhethe i-ovini ngezici ezinhle kakhulu, ngokusekelwe kwimingcele elandelayo: amandla e-cubic ekamelweni le-steam kanye nomkhiqizo wokushisa. Ukuze unqume ivolumu ekamelweni le-steam, udinga ukulinganisa ububanzi, ubude nobude, ukuhumusha izilinganiso zibe ngamamitha. Uma ukwandisa lezi zibalo, uthola ivolumu yekamelo ngamamitha ayi cubic. Kumele ucabange ukuthi i-cubature ethile ngeke ibe ngokwanele. Izindonga noma ukuwasha, okuphelile ngezitini, eziboshwe ngetayili noma itshe, kufanele zengezwe egumbini levolumu. Indawo yabo kufanele inqunywe ngokuphindaphindiwe ngu-1.2, futhi ngemuva kokwengeza emkhathini we-cubic kubalwa ekuqaleni. Lokhu kubonisa ukuthi imitha eyodwa yesikwele yalesi sigqoko izokwandisa ivolumu ngo-1.2 cubic metres.
Uma kukhona izingcingo zemibukiso ehlala ebhodini, lapho kubalwa ivolumu kuzodingeka ukwengeze 1, 5 cubic metres. Uma kunezingodo zogodo ngaphandle kwe-shelling, kubalulekile ukwandisa ivolumu ngo-1, 5 izikhathi. Abathengi baneluleka ukukhetha isithando somlilo ukuba bakhethe isilinganiso esiphakathi kwamanani aphezulu amabili. Isibonelo, uma ivolumu ekugezeni ngamamitha ayi-cubic angu-20, udinga ukukhetha i-oven yegesi ukuze amandla akho alingana nomkhawulo wamamitha ayi-15 kuya ku-25 wamamitha ayi-cubic. Uma unesithakazelo ezitsheni zegesi ze-dacha, khona-ke ungakwazi ukuqonda izici zedivayisi ngokubala amandla ngokususelwa kumthamo wekamelo.
Uma uqondiswa ngamakhodi wokwakha, kuzomele ucabange ukuthi ku-0,4 cubic metres of space udinga ama-kilocalories angu-252. Uma ufaka idatha yakho kulo mthetho, ungathola amandla afanele. Umnotho wemishini uzobalulwa ngesisekelo samakhemikhali azoshiswa njalo ngenyanga. Ngokusho kwabathengi, inkomba eyodwa yamandla ngeke ibe ngokwanele ukukhetha ngokuqondene nesithando esihle.
Ukukhetha idivayisi ngento
Uma udinga isitofu segesi se-villa ene-cylinder, ungafunda ngakho kulesi sihloko, ngakho-ke kubalulekile ukuba unake ulwazi olusekelwe phansi. Ukusuka kwendawo yokwakha insimbi, insimbi, izitini kanye nodonga oluzoxhomeka ukuthi isithando somlilo sizobe silungele ukukhonza kanjani ukuze kuzuze umnikazi. Abathengi abanokuhlangenwe nakho bacebisa ukuthi bakhethe amamodeli ayenziwe nge-alloy steel, equkethe inani elikhulu lama-chromium ukungcola, yingakho lo mklamo unokwethenjelwa kunabo bonke abakhona emakethe. Phakathi kwezinye izinto, isitofu esinjalo segesi se-villa ene-cylinder, isithombe ongayithola kulesi sihloko, sigcina i-oksijini egumbini elingcono kunezinye izifanekiselo zokushisa. Lokhu kungenxa yokuthi i-oxidation yezinto zokwelashwa ezingenayo ikhambi ayitholakali esithandweni somlilo . Insimbi itholakala ekuqoqweni kwenkampani ethi "Termofor" ne "Feringer", ekhona eRussia. Uma ukhetha onobuhle obenziwe ngensimbi, ungathembela usayizi omncane, obonisa ukuthi asikho isidingo sesisekelo. Amafomu anjalo kulula ukufaka nokulondoloza.
Uma umthengi athengisa ihhavini yegesi e-dacha, ukubuyekezwa kufanele kufundwe nabo ngaphambi komzuzwana wokuthenga. Umthengi wanamuhla ufuna imikhiqizo eyenziwe yensimbi yensimbi, engeyona into engafanelekile kunaleyo. Kodwa-ke, ngenxa yezizathu ezithile, kunzima ukuthola izindlela ezinjalo emakethe yasekhaya. Umlilo wezitini awukwazi ngisho nokufunwa, ngoba kuyisithelo sokucabanga. Kodwa-ke, ungalingisa isithando somlilo ngokwakho, ngoba lokhu kuyodingeka ukuthi inkosi ithenge isithando somlilo, ufake isikrini esilinganisa izitini, bese ubeka isitini.
Ukubuyekeza kwamakhasimende ngezici zokuklama
Uma udinga ihhavini legesi nge-cylinder, ungafunda ngalawa madivayisi kulesi sihloko. Uma ukhetha imodeli, ungakhohlwa ukuthi uhlela kuphi ukuklama. Izitsha zegesi zanamuhla zingaba nokuhluka kokubili. I-Oblong yakhelwe ukufakwa odongeni, okuyinto ekhetheke kakhulu. Ukukhonza imishini enjalo kungaba kusuka ekamelweni elilandelayo. Inguqulo yesibili yesithando senziwa ukuze kufakwe noma kuphi ekamelweni.
Njengoba abathengi bayiqaphele, lokhu kuyinzuzo eyengeziwe yalezi zixhobo zokushisa, njengoba ungakhetha imodeli ethize, kuye ngokuthi uhlelwe kanjani ekamelweni.
Kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isitofu segesi se-cottage nebhaluni, uzocatshangelwa ukuthi izici zayo zekhwalithi kufanele zikuvumelane ngokuyinhloko ngokwemisebenzi. Kuphela ngale ndlela uzokwazi ukusebenzisa imishini engeke ihluke ekusetshenzisweni kukafutha okungeziwe.
Isaya Washington (Isaya Washington) - Biography futhi Filmography umlingisi. amaqiniso ethakazelisayo
Ikhaya isoseji ngaphandle GUTS: zokupheka kanye izimfihlo ukupheka
Ingulube utamatisi kanye noshizi kuhhavini - izinketho eziningana for ukupheka
Angioedema: kungani nokuthi